စမတ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီး စမတ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အားလုံး ပေါင်းစုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ (linear ရွေ့လျားမှု အခင်အရှင်s)ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင်, ဂိတ် အခင်အရှင်, နှင့် etc.The စမတ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator များမှာ ခွဲခြား သို့ ကွဲပြားခြားနားသော ကဏ္ဍများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် အဆိုပါ သမားရိုးကျ စီးရီး နှင့် ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား စီးရီး. အားလုံး အဆိုပါ စီးရီး များမှာ ရေးစပ် အားဖြင့် အဖွင့်အပိတ်, ပြောင်းလဲပစ် နှင့် ဉာဏ်ကောင်းသော ထုတ်ကုန်။ ကျော်လွန် အဆိုပါ အနှစ် က hအဖြစ် အတွေ့အကြုံရှိ အမျိုးမျိုးသော လယ်ကွင်း ၏ နိုင်ငံတွင်း နှင့် ဘို့eign စျေးကွက် လေ့ကျင့်သည် နှင့် လြှောကျလှာ စဉ်တွင် ဆည်းပူး အဆိုပါ ဆုလာဘ် ၏ ပေါင်းစုံple အမျိုးသားရေး နှင့် interအမျိုးသားရေး အရည်အချင်းများ။
သေလွန်သောသူတို့သည်ဇုန်: ¤2% â
remote control setting များကို
AOX-M စီးရီးစမတ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator များအတွက် 1. လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး
AOX-M စီးရီးစမတ်စက်တပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator တွင် / ပယ်ရိုးရှင်းပြီးအသိဉာဏ် Module ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် fieldbus interface ကိုထံမှအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 60,000 လျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု AOX-M စီးရီးစမတ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ၏အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
အဆို့ရှင်နှင့်အတူ mounting AOX-M စီးရီးစမတ်စက်တပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator Thermal ပါဝါမျိုးဆက် (ကျောက်မီးသွေးနှင့်အခြားမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်း), နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မျိုးဆက်, လေပါဝါမျိုးဆက်နည်းပညာ, နျူကလီးယားပါဝါ, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါဝါမျိုးဆက်, ရေပါဝါမျိုးဆက်တူ, လျှပ်စစ်ပါဝါကိုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် (ဒီရေ, ရေအားလျှပ်စစ်ဘူတာရုံ)
Q: AOX-M စီးရီးစမတ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ?
မေး: AOX-M စီးရီးစမတ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator အဘို့သင့်ပေးပို့သည့်နေ့စွဲကဘာလဲ?
hot Tags:: စမတ် စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်